edit: 62 isanjato ny fandresen'ny TGV teto Antananarivo | Hevitra MPANOHARIANA
miandry ny rampitso :)
Nampidirin'i simp @ 16:13, 2007-12-12 [Valio]
hehehehe copier- coller: mety foana io, satria ra8 sy rafaly kou nanao copier-coller ny fikan'i Deba t@ fotoan'androny :) raisonnement scientifiq, tsotsotra ny hoe refa tsy ovaina ny hyppotheses, dia mitovy foana ny vokatra azo ;) 57% kosa ve d azo angalarana na dia efa hoe asiana panina ndray aza ny ordinateur eny @ coupole e :) ok ok ekena 100% ny VETO, milay ary en tps reel :) misaotra lesy e
Nampidirin'i simp @ 18:47, 2007-12-12 [Valio]
Dia manamarika izao vokatra izao fa tsy dia misy saina loatra ny ankamaroan'ny malagasy (tananariviana), fa mbola manohy ny toy ny nataony t@ i Ravalo t@ fifidianana azy ho maire.
Nampidirin'i Olon-tsotra @ 20:46, 2007-12-12 [Valio]
Rehefa lany ny kandida tsy tianao ry milaza azy ho Olon-tsotra dia aza ny vahoaka no ompaina. Ny fifidianana ange tsy maintsy natao ary tsy maintsy nisy ny nandresy e! Mba manontany anao aho hoe iza amin'ireo kandida nahatonga vato ary no tokony ho nofidiana vao hoe misy saina ny mpifidy? Izaho, mba saika hanao safidy ho an'ny Intellectuel saingy tany aza tsisy vatony, dia naleoko nifidy kandida 2è choix toy izay hanao vato fotsy.
Nampidirin'i DotMG @ 07:27, 2007-12-13 [Valio]
Nahoana tokoa moa no lazaina fa tsy misy saina loatra? Moa tsy "vote sanction" no tena nataon'ny mponin'Antananarivo? Anjaran'ny TIM no mieritreritra ny lesoka lehibe tsy nifidianan'ny olona azy tamin'ity indray mitoraka ity.
Marina fa mety ho olotsotra ianao saingy tsara ny mandanjalanja fitenenana. Aleo tsy manebaka fa manazava fotsiny.
Nampidirin'i jentilisa @ 08:39, 2007-12-13 [Valio]
Io ary hoy aho ilay nolazaiko hoe tsy misy dikany ny isan'ny olona mijery fara-doboka sy mijery propagande fa ny ao antananarivo matetika efa mahafantatra ny ho fidiany.
"Vote sanction" tokoa io, satria ny mponin'antananarivo tsy adala, fa dia anjaran'ireo kandida hafa ny mandanjalanja.
Fa ny mampiaiky ahy dia rehefa hilatsaka hofidiana ve izany dia tsy maintsy manana télé sy radio aloha @zay tena sur fa ho lany?
Nampidirin'i maintikely @ 10:27, 2007-12-13 [Valio]
Misaotra amin'ny tatitra "miaraka amin'ny vava" Ra-Jentl a, Mankasitraka !
Be ny fanantenan'ny vahoaka ka mapanahy ihany izany efa fanambarana fa tsy hisy fiaraha-miasa amin'ny governemanta izany. Tsy tokony ho laniana amin'ny ady fotsiny ny "mandat". Raha tsy dia hoe dingana fotsiny ny "mairie" ... tohatra fiakarana :(
Nampidirin'i tomavana @ 11:25, 2007-12-13 [Valio]
ho tonga sainave ry tim a!
ho tonga saina ve ny tim sa mbola hanao ny fanaony ihany!tsy ahita lalan haleha eo moa fa ataovy koa!ny kilaoty sisa ho anetina any bulgarie any!
ka manao ahona ry jentilisa,salama ve!mankamamy eeeee!
Nampidirin'i akama2006 @ 22:05, 2007-12-13 [Valio]
Aza mieritreritra hoe marary aho ry akama a! demokrasia io! mbola manomboka anie ny lalao e! miandry ny asa amin'izay isika!!!
Nampidirin'i jentilisa @ 07:28, 2007-12-14 [Valio]